Top 10 Best Zoro Ezo ese foto maka Nyochaa ịghọ aghụghọ ule di na nwunye - OMG Solutions
Kachasị igwefoto zoro ezo SPY kachasị mma maka SPY maka Monitor Chewun Spouse
O nwere ilu ndị Russia “tụkwasara obi ma chọpụta”, ntụkwasị obi bụ ihe bụ ihe na-eme ka mmekọrịta ahụ sie ike n’etiti mmadụ abụọ. Ọ fọrọ nke nta ka di na nwunye ọ bụla na-agafe ebe ha chere na onye òtù ọlụlụ ha na-aghọ aghụghọ na ya. Littleinga ntị obere na ịme nyocha ụfọdụ ga - enyere gị aka site n'aka ndị mmekọ dị aghụghọ. Mana ị gaghị enwe ike ilekwasị anya na onye gị na ya na-emekọ ihe niile, yabụ n'isiokwu a, anyị ga-atụ aro igwefoto ndị zoro ezo 10 zoro ezo ị nwere ike iji chọpụta nwunye gị na-aghọgbu gị.
Anyị niile ga-ekwenye na ịhụnanya abụrụla naanị okwu oge ugbu a, ọ nweghị onye ji ya kpọrọ ihe ma ọ bụrụ na mmadụ ewere ya. Ejiri ha dị ka obere akwukwo. Ọ bụ ezie na n'oge dị otú a, ebe ị na-enweghị ike ịtụkwasị nwa agbọghọ obi na-ekwukarị na m hụrụ gị n'anya n'ihu gị, ọ na-achụ nwoke na ndị ọzọ ọ bụla ọ hụrụ. Kedu ka ị ga - esi mata ma ọ bụ onye ọkpụkpọ na-emebi obi gị ma ọ bụ onye hụrụ iwu n'anya? Nke ahụ bụ eziokwu, SPY013 bụ ihe ahụ. Enwere ike itinye igwefoto elekere a zoro ezo na akụkụ ọ bụla, na ebe ọ bụla ma ọ bụ n'ime ụlọ ọ bụla na-enweghị ntụpọ ma ọ bụ mara ya dị ka igwefoto ma ka na-enye gị akụkụ kachasị mma iji lekwasị anya na onye gị na ya na-emekọ ihe. Ọ na - abịa n'ọhụụ igwefoto 1080p HD abalị nke na - enye oke ohere iji jide n'aka na ọ abanyeghị n'ihe onye ọzọ n'abalị. Ọbụghị naanị nke ahụ kama ọ na-abịa na njiri nchọta ngagharị iji mee ka ị mata ihe ọ bụla pere mpe a na-egosi na ihuenyo!
Ugbu a, olee otu ị ga - esi ghara ime ya ihe ọ bụla maka ibe gị ma ọ bụrụ na enwee obi abụọ banyere ha maka ịghọ aghụghọ ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-eche na ha na-ahụ onye ọzọ? N’ezie, site na ijide n’aka Ngwa ị na-eji ledoo ha anya na-apụ n’anya mmadụ. Na ihe ọzọ nwere ike ịbụ ụzọ kachasị mma iji nwulite mmadụ kama ịbụ freshener ikuku karịa ọ bụghị naanị freshens ikuku kama ọ na-emekwa ka ọ bụrụ ihe ga-ezuru ya idobe nkuku dị ka enweghị onye ọzọ na ibe gị mgbe ha na-aghọ aghụghọ. Ngwaọrụ a nwere ike dekọ ihe ruru 70 elekere ogologo oge na-akwụsịghị site n'inye gị ohere ahụ ị kwesịrị ịme ogologo oge nke onye ọ bụla ịchọrọ na oge ọ bụla ịchọrọ na-enweghị mgbagha banyere batrị ya. Ọ nwekwara ike nọrọ na njikere ruo elekere 100 nke bụ n'ezie nzuzu n'ezie. Ihe a ga-elebara gị anya mgbe ị na-arụ ọrụ, kọleji ma ọ bụ ebe ọzọ na onye gị na ya na-akparịta ga-aga n'ihu wee kpọọ mmadụ ọzọ. Naanị ihe a ka ị ga - eme ya ebe ọ bụ na kedu onye ga - atụgharị uche freshener ikuku n'akụkụ ọ bụla?
A bịa n’ihe banyere ịghọ aghụghọ n’ule, ndị nwanyị bụ naanị ndị a ga-ata ụta n’oge ugbu a dịka ụmụ nwoke agbanahụwo ma jidere n’ọtụtụ oge na-emebi obi ndị ha hụrụ n’anya dịka ha abụghị ihe ọ bụla. Yabụ etu ị ga - esi jide n'aka na okorobịa gị bụ onye na - eguzosi ike n'ihe ọ bụghị onye ga - atụfu gị karịa onye na - enye penny ma ọ bụ abụọ? N’ezie, site n’ilegide ya anya na ijide n’aka mgbe ị na-anọghị ya ma ọ bụ mgbe ị na-anọghị ya, ọ dịghị na-achọgharị n’elu ọkụkọ ọzọ ma ọ bụ ihe. Maka ebumnuche ahụ, ngwaọrụ a bụ nke kachasị mma ịgwakọta ọnọdụ ahụ ma ghara inwe obi abụọ n'ezie. SPY151 bụ ngwa ọrụ nke nwere ike idekọ vidiyo HD Ogo kacha mma yana yana ụda n'otu oge iji hụ na ihe ọ bụla na-eme na ntụpọ ma ọ bụ ụlọ ma ọ bụ ebe ọ bụla etinye ya ga-abụ nke ukwuu ma nụ nke gị. Ọ nwere ike dekọba ụlọ 3 dị ịtụnanya nke ụgwọ ọ bụla zuru oke nke oge dị mma iji nwee ọnọdụ na-adịghị mkpa iji dekọọ ọnọdụ zuru ezu iji mesie ma ọ bụ hụ na onye gị na ya na-aghọ aghụghọ ule ma ọ bụ na ọ bụghị.
Ekwupụtala obere ihe a na ọtụtụ ederede ugbua, mana ọ dị ka ọ bụ arụmọrụ yana ebumnuche ị nwere ike iji ya maka ịnwe ọtụtụ ndepụta aha n’ezie na ọ dịghị ka ọ ga-abịa na njedebe. Ee, anyị na-ekwu maka igwefoto chaja WIFI n'ezie, otu n'ime igwefoto na-enweghị ike ịchọpụta nke mmadụ na-enweghị ike ikwenye ekwenye ma ọlị. Naanị kpoo ya na ntanetị ọ bụla n'ụlọ gị ka ọ kwụ ụgwọ WIFI gị n'otu oge ahụ na-ejikwa nchekwa dị elu yana ihu dị larịị ka ị na-echekwa banyere nwa agbọghọ ma ọ bụ nwa nwoke ọ bụla ọzọ nke onye gị na ya na-abanye. Nke a bụ ihe ị nwere ike ibidokwa na tebụl ma ọ bụ n'ụlọ ebe ọ bụla ọzọ ma ọ ka ga - enye gị arụmọrụ kachasị mma n'ihi igwefoto ndekọ ndekọ 10180p yana njikwa ntụpọ 180. Nke a bụ naanị otu ihe ga - azọpụta gị na mmekọrịta mmekọrịta abụọ, ọ na - a hụ na ị ga - adị otu ahụ na nke si n'obi gị!
Na oge a, ndị mmadụ na-eke ọtụtụ ihe n'ihi oke nke ọnụ ọgụgụ saịtị mkpakọrịta nwoke na nwaanyị yana akaụntụ adịgboroja ebe niile na-anwa izu onye gị na ya na-eme. Ugbu a iji zere ụdị ọgbaghara a ma gbaa mbọ hụ na onye ị hụrụ n'anya adabaghị maka ihe dị ka nke ahụ ma ọ bụ na-aghọ aghụghọ na ya, SPY175 nwere ike ịbụ naanị ihe ịchọrọ iji mee ka obi sie ike na ihe niile dị n'okpuru aka gị ma ị ga - enweta obere ahụ. Gosi onye gị na ya na-emekọ ihe anya ka ọ na-elekọta ihe ọ na-eme, onye ọ na-ezute na onye ọ na-akpọ n'otu oge ahụ ma ị nọ n'ụlọ ma ọ bụ na ịnweghị n'ụlọ. A sị ka e kwuwe, ekwentị bụ isi ihe na-akpata n'ịghọ aghụghọ ule ugbu a kemgbe ịrị elu nke teknụzụ ebe niile ndị mmadụ ga-anwa ịchụ ma mee ụmụ agbọghọ abụọ n'otu oge ahụ. Naanị kwunye igwefoto nledo a, chajie ya, tinye ya na akụkụ ma ọ bụ ntụpọ ịchọrọ ma hapụ ya ka ọ rụọ ọrụ ndị ọzọ na mkpebi igwefoto 4K yana nkwado ọhụụ abalị iji hụ na anya zuru oke na onye gị na ya na-emekọ ihe ọbụladị na obere ọkụ. tụrụ.
Onye ọ bụla na-aga otu maka ụdị ihe ụbọchị ndị a ebe ọ bụ na ha anaghị emefu ego ma nwee ike inye gị ọtụtụ ụdị ihe ịchọrọ kemgbe kemgbe ị jikọtara ọnụ n'otu ngwugwu. SPY297 bụ ihe ziri ezi maka gị ma ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị ahụ, n'ihi gịnị? N'ihi na ọ na-arụ ọrụ dị ka elekere ọkọlọtọ, mkpu, igwefoto Wi-Fi, na igwe okwu Bluetooth na-enweghị eriri n'otu oge! Yabụ, ọ bụrụ na onye gị na ya so na-aghọ aghụghọ na gị n'oge oge abalị ma ọ bụ mgbe ị na-apụ, nke a bụ naanị elekere zuru oke ị ga-achọ maka iwepụ oge ya na nke ahụ site na iji aka mara mma ebe ọ bụ na igwefoto a nwere ike idekọ mkpebi HD. vidiyo ọbụna n'abalị oge! Gbalịsie ike na onye ahụ nke mebiri obi gị agaghị anwa anwa imebi onye ọ bụla ọzọ ka ọ ga-abụ hel nke ụjọ ịma ịma mmadụ nwere ike ịchụ ma ị chọpụta na ị na-aghọ aghụghọ. Nwekwara ike ịnụ ụtọ ngwa a dịka onye na-ekwu okwu Bluetooth ma kpọọ ya ụda kachasị amasị ya na ya ka ọ bụrụ elekere mkpu ọ bụrụgodị na ọ nweghị uru ọ bụla, yabụ nke a bụ otu afọ.
SPY032 - WIFI PINHOLE CAMERA:
Ọ dịghị ihe dị ka ihe ochie ochie nnyocha ihe ọ bụ? Nke ahụ bụ eziokwu ndị mmadụ SPY032 bụ naanị ihe ahụ ma ọ bụrụ na ị maara nke ọma na onye gị na ya na-aghọ aghụghọ na gị na mmadụ na ịchọrọ ijide ha n'aka-dị ka ngwaọrụ a nwere ike ịdabere n'akụkụ ọ bụla nke ahụ mmadụ ọbụna na-enweghị ihe ọmụma ya. iji hụ na akuku ị chọrọ naanị maka ịdekọ ihe nwere ike igosi ya otu oge na ihe ọ bụla nke aghụghọ ọ na-ewepụ apụ na-egwu obi gị yana nke onye ọzọ. Ngwaọrụ a na batrị batrị na-eme ka ịdekọ ihe ruru elekere 70 ogologo ka ị nwee ike jiri nwayọ chere mgbe ị na-ejikọ ya site na WIFI na-ejide n'aka na ị zuru oke ma gbaa egbe ka onye ọzọ ghara ịgọnarị. mgbe ebighi ebi. Ngwaahịa a enweghị ike ọ nweghị uru ọ bụla ma ọ bụ pụta n'enweghị nsogbu ọ bụla ma ị na-eji ya maka iledo nwaanyị, nzube nchekwa ma ọ bụ naanị maka ihe ọchị! A na-ahụ ka ọ na-amasị gị na nsonaazụ ya n'ihi njirimara ndị juputara na ya.
Lovehụnanya bụ ihe dị oke mkpa ma ọ bụrụ na igosipụtaghị naanị ihe ziri ezi. Ọbụ onye nke ọzọ nwere ike na-aghọ aghụghọ ma ọ bụ na ọ nwere ike erute gị n'agbanyeghị ihe ị bụ n'ihi na ọ bụ naanị otu ahụ ka ụwa si aga n'oge a. Yabụ, ị na-eche ihe ị ga - eme ka ị ghara ịchọpụtacha otu oge ka ị na-eleghara onye gị na ya na-azụ anya ma ọ bụ na-ahụ na ọ ga - emegharị, ọ na - elele gị? N'ezie, gafere maka SPY208. Ihe a bụ ihe nzuzu nke ekwuru okwu Bluetooth n'ezie, ịnwere ike ịkpọ egwu na ya ruo ọtụtụ awa n'ebe gị, n'ọfịs gị ma ọ bụ ebe ọ bụla ọzọ ma hapụ ya ebe ahụ ka ọ na-egwuri egwu iji hụ maka ihe onye ịchọrọ ịchọrọ. na-eme ma ọ bụ ka ọ na-eme dị ka mgbe ị na-anọghị mgbe ahụ. Na teknụzụ netwọta WIFI ya, ịnwere ike ijikọ ya n'oge ọ bụla na ụlọ ọ bụla nke ụlọ gị ikekwe. Odekọ vidiyo 4L HD na-eme ka ị jide n'aka na ị na-etinyerịrị otu vidiyo niile nye onwe gị mana ọ naghị achapụ. Ọ bụ ft SD oghere nke na-akwado kaadị SD ruo 128 GB na-enye gị naanị nchekwa ịchọrọ maka iji nnukwu ngwaọrụ dị ka nke a!
Ngwa a dị oke mkpa ga - abụrịrị onye kachasị enyocha ya dịka ọ bụ otu ihe conman nke dị n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ niile enwere ike iji ya na enweghị nlekọta ọ bụla dịka anyị niile maara na ọ nweghị onye ga - enwe obi abụọ inwe igwefoto na - achọ ịma. igbe anụ ahụ?! Nke ahụ bụ asatọ, SPY156 mejupụtara nke kachasị mma na ndepụta a dịka anyị si dị n'ihi na nke a bụ otu ihe ị nwere ike ilegide anya na onye ọ bụla ma ọ bụrụ maka onye aghụghọ, ọ bụrụ na ọ bụ maka nchekwa ụlọ gị, ka ị na-elegide anya gbara gị gburugburu ma ọ bụ ihe ọ bụla. Ọ na - ekpuchi ihe niile n'usoro nke ọma nke na mmadụ agaghị enwe ike ịmata igbe igbe nwere ike imekọta ya ma a bịa na teknụzụ. Nke a bụ eziokwu, ngwaọrụ a juputara na batrị nke nwere ike idekọ ogologo oge 2 wee kwado kaadị SD ruo 32 GB. Ọbụghị naanị nke ahụ mana otu ihe pụrụ iche gbasara igwefoto igbe anụ ahụ bụ na ị nwere ike ịlele ya ka ọ dịrị oge ọ bụla site na ekwentị, pc ma ọ bụ laptọọpụ na-enweghị nchekasị ọ bụla! Ọ nwere ike dekọtara mkpebi 1080p na-emesi obi ike zuru oke n'otu oge ahụ ọ bụ nchekwa zuru oke na-achọ mmegharị ọ bụla na mpaghara ị tinyere ya. Nke a bụ otu ihe onye ọ bụla agaghị enwe obi abụọ banyere ya
O nweghi onye n’enwe egwu ga-ezuru gi, ma obu gi ma obu onye ichoro ime ka gi na ya di ugbu a. Onye ọ bụla dị maka nhọrọ abụ nke ọ chọrọ ịkụ ihe n'akụkụ oge ọ bụla ọ na-anọdụ ala ọ bụla ma ọ bụ emume ọ bụla, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ijide n'aka na ị chịkwaara ọnọdụ ahụ n'otu oge ahụ na-agbanyeghị onye ahụ mma. Mgbe ahụ nke a bụ otu ihe ọzọ, ihe a bụụrụ gị ihe! SPY113 nwere ike ịdekọ vidiyo HD kacha mkpa na oge ọ bụla ma na-enwetara gị ya site na laptọọpụ ma ọ bụ ekwentị ọ bụla ịchọrọ ilele vidiyo ahụ, na-enye gị ohere ịhapụ ọbụna onye ịchọrọ anya. ka nwere akụkụ zuru oke iji dozie ọnọdụ ọ bụla ha na-eme ma gbaa mbọ hụ na ha anaghị eme ihe ọ bụla na-emebi gị, ahụike gị ma ọ bụ ọnọdụ uche gị. Ebe ọ bụ na ịhụnanya abụrụla okwu ugbu a, ọ dị m ka ngwaọrụ ndị a aghọọla ụdị nkịtị ọfụma maka ihe ha enwetara ya, yabụ iji ha nwere ike ọ bụghị ihe ọjọọ.
Nzuzo 8105 2 Echiche Taa